Radio Don Bosco - Raha ny rantsan-tanan’Andriamanitra no androahako ny demony...
Ry havana, rentsika tamin’ny Evanjely teo fa tsy fanahy madio ihany no misy eto amin’ity tontolo ity fa miahoaho eny amin’ny rehetra eny ary mitady izay hitoerany ny fanahy maloto. Mila miaro tena ny amin’izany isika, ka anisan’ny tsara indrindra amin’ny fiarovan-tena dia ny fialofana eo ambany rantsan-tanan’Andriamanitra, izany hoe eo ambany fahefan’Andriamanitra sy ny heriny. Hoy mantsy i Masindahy Paoly hoe : velona isika ho an’ny Tompo, ary maty isika ho an’ny Tompo. Araka izany, mila tandrovana toy ny anakandriamaso ny fahadiovantsika eo anatrehan’Andriamanitra ary raha sanatria miseho ny fahalemena maha olombelona ka tapaka ny fihavanana amin’Andriamanitra dia mila averina amin’ny laoniny faran’izay haingana izany amin’ny alalan’ny sakramenta eo anivon’ny Eglizy ary raha sendran’ny asan’ny demony, dia ny fanatonana ireo olona nomena fahefana manokana amin’izany raharaha fandroahana demony izany no atao.
Tandremo fa efa be ny mpanararaotra ankehitriny, milaza ho mpandroaka demony. Ho antsika katôkika, misy mpandraharaha masina efa natokana amin’izany, ireny no atonina. Raha lazaina amin’ny teny hafa dia hoe : aza omena hirika eo amin’ny fiteninao, amin’ny fitafinao, eo amin’ny fianakavianao, eo amin’ny vondrona misy anao ny demony. Mazava anie ny tenin’i Kristy, “izay tsy momba ahy dia manohitra ahy”, hoy Izy. Koa isika izay eo ambany fiarovany sy ny fitantanany àry dia mpanaraka Azy, fa tsy mpanohitra ny Teniny isika. Aoka àry, araka izany tsy ho titre na anarana entim-poana ny maha an’i Kristy antsika. Raha tsy mitandrina manko sy tsy miaro tena araka ny voalaza etsy ambony dia fiainana ratsy kokoa hatrany no sandan’izany : saritsarim-pahasambarana mifono fahoriana amam-pahafatesana mandrakizay.